Ciidamada Danab iyo kuwa Maraykanka oo hawlgal wadajir ah ka fuliyey Sh. Dhexe - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG) – Hawlgal ciidan oo ay si wadajir ah u fuliyeen Ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan guutada sida gaarka ah u tababaran ee Danab iyo ciidamada Maraykanka ee fadhigoodu yahay Afrika, ayaa xalay ka dhacay gobolka Shabeellada Dhexe.
Ciidamada huwanta ayaa lagu soo warramayaa in saqdii dhexe ee xalay ay weerar kedis ahaa la beegsadeen fariisimo mileeshiyaadka Ururka Al shabaab ku leeyihiin tuulooyinka Baqdaad iyo Basra.
Wararka ayaa intaas ku daraya in hawlgalkan lagu soo furtay maxaabiis ay tiradoodu 7 tahay, kuwaas oo ku jirey gacanta Al shabaab. Faah faahin dheeri ah lagama hayo haybta maxaabiista, sidoo kale ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo baaxadda khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac muddadii uu hawlgalku socday.
Ciidamada hawlgalka fuliyey ayaa lagu soo warramayaa in ay saaka ku waaberiisteen inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye.
Milateriga Maraykanka ee hoos taga taliska AFRICOM ayaa sannadkan 2018 kordhiyey hawlgallada ay la fulinayaan Ciidamada Xoogga Dalka, iyagoo sidan oo kale dhowr mar oo hore uga qayb qaatay weerarro lala beegsaday saldhigyada Al shabaab.